Dowladda Soomaaliya oo Dooneysa in ay mideyso shirkaddaha isgaarsiinta dalka	|
Dowladda Soomaaliya oo Dooneysa in ay mideyso shirkaddaha isgaarsiinta dalka
Dowladda faderaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay xilligaan socdaan qorshayaal lugu doonayo in lugu mideeyo shirkaddaha isgaarsiinta ee ka jira dalka,waxaana la sheegay inay arrintaan timid kaddib markii ay sii kordheen shirkaddaha isgaarsiinta ee xilligaan ka shaqeeya dalka.
Warkaan ayaa waxaa uu ka soo baxay wasaaradda warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta, Soomaaliya,waxaana la sheegay in qorshaya lugu mideenayo shirkaddaha isgaarsiinta inuu marayo heer gabo-gabo ah.
Ex wasiirka warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta C/llaahi Ciilmooge Xirsi,oo ay xilligaan wasaaraddisu wado qorshahaas ayaa waxaa uu si cadd u sheegay in shirkaddaha isgarsiinta ee dalka ku sii kordhaya in lagala kulmay caqabado badan.
“Waxaa jirta inan wadno dadaallo lugu midneenayo shirkaddaha isgaarsiinta ee dalka ka shaqeeya,waxaan arrintaa inan ka fikirno keentay kaddib markii caqabadaha jira ee aan dooneyno in aan wax ka qabano taasi ayaa ka mid ah”, ayuu yiri C/llaahi Ciilmooge isagoona qiray kala qeybsanaanta shirkadaha isgaarsiinta caqabado kale in ay ka taagan yihiin.
Caqabada ugu xooggan ee ka dhex jira shirkaddaha isgaarsiinta ayaa la sheegay marka la’eego kuwa ka shaqeeyo kararka taleefonada inay shacabka ku qasbanaan inay kaarar kala gadisan qaatan maadaama shirkadduhu ay kala duwan yihiin,balse xilligaan waxaa soo baxday in shirkaddaha isgaarsiintu ay ku heshiiyen in ay iswaci karaan taasoo meesha ka saartay dadku inay qaataan dhawr taleefan, balse heshiiskaasi meesha ayuu ka baxay markii dambe.
C/llaahi Ciilmooge Xirsi wasiirka warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo qaaday qorshaha wasaaradda ay hirgalinayso sanadkaan in ay ugu soo horeyso xalinta iyo wax ka qabashada caqabadahaasi.
Arrintaan ayaa la sheegay haddii ay ku guuleysato wasaaradda, waxaa uu noqon karaa mid ammaan iyo soo dhaweyn ay kaga kasbato shacabka.